Xog: Sii daynta Roobow oo ay hortaagan tahay arrin uu ka cabsi qabo Lafta-gareen iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka | SMC
Home WARARKA MAANTA Xog: Sii daynta Roobow oo ay hortaagan tahay arrin uu ka cabsi...
Xog: Sii daynta Roobow oo ay hortaagan tahay arrin uu ka cabsi qabo Lafta-gareen iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka
Muddo ku dhaw laba sano ayaa ka soo wareegtay markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay laga soo qabtay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, waxa uuna xiligaas ahaa musharaxa ugu cad cad doorashada Koonfur Galbeed.
Tan iyo markii la xiray Abuu Mansuur waxaa socday dadaallo lagu sii deynayo hase yeeshee wali laguma guuleysan waxaana soo baxaya warar sheegaya in aan la sii deen doonin ilaa ay ka hagaagto cabsi uu ka qabo Lafta-gareen.
Warar aan ka helnay xildhibaano iyo siyaasiin xog ogaal ah ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in Abuu Mansuur uu u xiran yahay in laga cabsi qabo in uu mucaarad ku noqdo maamulka Koonfur Galbeed, maadaama taagero badan uu leeyahay.
“Abuu Mansuur, in uu sii xirnaado waxaa dalbaday siyaasiin ku xiran Villa Somalia iyo Lafta-gareen waxayna aaminsan yihiin inuu mucaarad ku noqon karo Laftagareen iyo Farmaajo iyo inuu noqon karo mucaarad saameeya nabad iyo nolal ilaa doorashada 2021-ka” ayuu yiri mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay SMC.
Cabdicasiis Xassan Maxamed (Laftagareen) iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa bishii koowaad ee sanadkii hore Baydhaba ka sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan usii deyn doonaan Abuu Mansuur Waa siday hadalka udhigeen.
Sidoo kale wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Xildhibaan Cabdifitaax Geeseey ayaa isu casilay arinta Abuu Mansuur waa siduu umada soomaaliyeed usheegay isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono sii deesmadiisa ilaa haddana kuma guuleysan arrintaasi.
Previous articleYAA HEEYSTO MAAMULKA KOONFUR GALBEED
Next articleMaxaa looga hadlayaa kulanka golaha shacabka